people Nepal » किन लसुन र प्याज देखि पर रहन्छन् ब्राह्मण ? किन लसुन र प्याज देखि पर रहन्छन् ब्राह्मण ? – people Nepal
किन लसुन र प्याज देखि पर रहन्छन् ब्राह्मण ?
Posted on May 28, 2018 by Purna Nanda Joshi
तपाईले पनि विभिन्न ठाउँमा देख्नुभएका छ होला, ब्राह्म्णहरु प्राय बाहिर खादैनन् । बाहिर पकाइएको खानामा प्याज र लसुन राखेका कारण उनीहरु त्यस्तो खाना अस्विकार गर्छन् । यस विषयलाई लिएर विभिन्न मत रहेका छन् । आखिर किन लसुन र प्याज देखि पर रहन्छन् ब्राह्मण ?
१. सात्विक–यसभित्र शान्ति संयम, पवित्र र मनको शान्ति जस्ता गुणहरु हुन्छन् ।
२. राजसिक–यसमा उत्साह र खुसीका गुणहरु आउने गर्छन्
३.तामसिक–यसमा उत्साहा, क्रोध, अहंकार र विनाशका गुणहरु आउने गर्छन् ।
ब्राह्मणहरु लहसुन र प्याज अहिंसाका कारण खाँदैनन् । प्याज, च्याउ र लसुन राजसिक र तामसिक रुपमा बाँडिएका छन् । यसको अर्थ उत्साह र अज्ञानतामा वृद्धि गर्छन् । किनभने यसका कारण जमीनमा रहेका धेरै जिवाणुको मृत्यु हुनेगर्छ । यसका कारण यसको सेवनमा गर्न ब्राहमण अस्विकार गर्छन् ।
बिप्लब समुह नेकपा हैन लूटेेरा समुह हो: प्रधानमन्त्री